Loko mitambatra – Color Combinations
Gospike.net ny fampahalalana manome sary be dia be ny sary avy hatrany aorian’ny fisokafanao ny fitaovana safidy miloko. Rehefa sarotra aminao ny mitady loko mihoatra ny sivifolo, manome io fitaovana io ny fitaovana fandrefesana marina ho an’ny loko amin’ny sary. Gospike.net dia nandefa fitaovana hisafidianana ny loko mety, ary azo jerena amin’ny habe, na amin’ny fotoana rehetra na amin’ny toerana rehetra. Rehefa miserasera amin’ny Internet ianao dia hampiditra entana sy hahita lokon’ny loko ary maneho ny lisitry ny loko tianao. Ohatra, ny loko miloko, ny lokon’ny loko, ny haben’ny loko ary ny fitambaran’ny loko. Ity dia tranokala tsara. Satria maro ny loko hita sy ny habe. Ary ny tombony hafa dia ny fanehoana lisitry ny haben’ny loko haingana. Noho izany, zahao ary mankafy ity tranokala ity hahitana loko maro samihafa.
Amin’ny ankapobeny, ny loko marevaka dia manome fahatsapana mahafaly sy falifaly. Ho an’ny fampiasana loko miankina amin’ny olona tsirairay. Toy ny loko ao amin’ny efitrano inoana fa afaka mamolavola hetsika ara-tsaina sy ara-tsaina. Raha mety ny loko ary tianao ny loko dia mety hisy fiatraikany amin’ny fampitomboana ny fahaizanao manadihady. Ny loko iray dia misy akony betsaka amin’ity fiainana ity ary ho an’ny saintsika koa. Amin’ny fampiasana karazana loko maro, ny loko manga matetika mifandray amin’ny matihanina sy ny fahatokisana. Ankoatr’izay, ny loko manga dia iray amin’ireo loko fototra ary afaka mitambatra amin’ny loko hafa, ohatra ohatra ny fangaro loko fototra raha ny loko manga arotsaka amin’ny loko fototra hafa toy ny loko mavo ka ny loko dia loko maitso. Angamba, io no antony nahatonga ny loko itiavany azy. Noho izany, io loko io dia tena mety ampiasaina amin’ny efitrano iray. Ankoatra ny firavaka manga, beige ary volontany koa dia lasa loko ankafizin’ny olona maro, izy ireo dia mampihatra loko ao amin’ny rindriny. Ary ankehitriny, ny loko malefaka no be mpitia indrindra ho an’ny tanora. Ankoatra ny loko fototra, ny kofehy loko sy kodiarana miloko izay lasa votoaty manokana amin’ity tranokala ity, misy koa ny karazan-trano isan-karazany sy ny sary hosodoko mahaliana noho ny loko. Satria, amin’ny loko fototra sy ny mitambatra loko izay manome ity tranokala ity, azontsika atao ny mampihatra loko amin’ny rindrina, fanaka na amin’ny sary hosodoko. Amin’ity tranokala ity, dia misy sary an-trano anatiny sy endrika ivelany ivelany izay azonao alaina na télécharger. Ny loko miloko maro dia afaka mahatonga ny tranonao tsara tarehy sy mahazo aina. Ny famolavolana vita amin’ny haingon-trano mahavariana, afaka ny ho fitaomam-panahy anao amin’ny haingo ny tranonao. Ny endrika amin’ny antsipiriany dia haneho feno amin’ity tranokala ity. Tsy ampinga trano ihany fa ao koa ny efitrano rehetra misy ny firavaka. Ohatra, ny famolavolana ao amin’ny efitra fatoriana miaraka amin’ny fandriana lohataona, ondana, bolsters, fanaka, jiro matory ary haingon-trano rindrina haingon-trano sy valindrihana. Miaraka amin’ny safidy famolavolana sy hevitra marobe maro dia mora kokoa ary azo raisina ho fiheverana ny famolavolana sy ny loko mety amin’ny tranonao.